Bit By Bit - မေးမေးခွန်းတွေကို - 3.5.2 ဝီကီစစ်တမ်းများ
ဝီကီစစ်တမ်းများတံခါးပိတ်နှင့်ပွင့်လင်းမေးခွန်းများကိုသစ် hybrids တွေကို enable ။
ပိုပြီးသဘာဝကအကြိမ်မှာပိုပြီးသဘာဝအအခင်းအကျင်းအတွက်မေးခွန်းများမေးအပြင်, နည်းပညာအသစ်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုမေးခွန်း၏ပုံစံကိုပြောင်းလဲခွင့်ပြုပါတယ်။ ဖြေဆိုသူသုတေသီများကရေးသားထားရွေးချယ်မှုကနေရှေးခယျြဘယ်မှာအများစုဟာစစ်တမ်းမေးခွန်းများ, ပိတ်လိုက်ကြသည်။ "။ လူတွေရဲ့ပါးစပ်စကားချပြီး" ဒါဟာတဦးတည်းထင်ရှားတဲ့စစ်တမ်းသုတေသီဖုန်းခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရဲ့ဥပမာအားဖြင့်, ဒီမှာတံခါးပိတ်စစ်တမ်းမေးခွန်းရဲ့:
"ဒီလာမယ့်မေးခွန်းအလုပျ၏ဘာသာရပ်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်ဤကဒ်ကိုကြည့်ရှုသငျသညျအမြားဆုံးအလုပ်တစ်ခုအတွက်ပိုနှစ်သက်မယ်လို့ဒီ list အပေါ်ပေးသောအရာပြောပြနိုင်မလား? "
အခုဆိုရင်ဒီမှာပွင့်လင်း form မှာမေးလျှင်တူညီသောမေးခွန်းတစ်ခုရဲ့:
"ဒီလာမယ့်မေးခွန်းအလုပျ၏ဘာသာရပ်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူ့အလုပ်တစ်ခုအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုကြည့်ရှုပါ။ သငျသညျအမြားဆုံးအလုပ်တစ်ခု၌အဘယျအလိုရှိ? "
အဲဒီနှစျခုမေးခွန်းများကိုအတော်လေးဆင်တူပေါ်လာပေမယ့်, Howard Schuman နဲ့ Stanley Presser အားဖြင့်စစ်တမ်းတစ်ခုစမ်းသပ်မှု (1979) ဖွင့်ရလဒ်များနီးပါး 60% မှာပိတ်ထားတဲ့တုံ့ပြန်မှု (ပုံ 3.7) တွင်အမျိုးအစားအပြင်ဘက်ဆုံးကြ: သူတို့အရမ်းကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်ကိုထုတ်ဖော်ပြသ။
မှရလဒ်များ: 3.7 ပုံ Schuman and Presser (1979) ။ တုံ့ပြန်ချက်မေးခွန်းတံခါးပိတ်သို့မဟုတ်ဖွင့် form မှာမေးလျှင်သည်ဖြစ်စေပေါ် မူတည်. အတော်လေးကွဲပြားခြားနားပါသည်။
ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်ပိတ်လိုက်မေးခွန်းများကိုအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောသတင်းအချက်အလက်များလိုက်လျောနိုင်ပြီးနှစ်ခုစလုံးစစ်တမ်းသုတေသန၏အစောပိုင်းကာလများတွင်လူကြိုက်များခဲ့ကြပေမယ့်, အပိတ်မေးခွန်းများကိုလယ်ပြင်ကိုလွှမ်းမိုးဖို့လာကြပြီ။ ပိတ်ထားတဲ့မေးခွန်းများကိုပိုကောင်းတိုင်းတာခြင်းများကိုသက်သေပြခဲ့ကြသောကြောင့်, ဒီလွှမ်းမိုးမှုသူတို့သုံးစွဲဖို့အများကြီးပိုလွယ်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, မျှမက, Open-မေးခွန်းများ coding ၏လုပ်ငန်းစဉ်ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်စျေးကြီးသည်။ ကသုတေသီတန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်နိုင်သည်ကိုရှေ့ဆက်အချိန်ရဲ့မသိခဲ့ပါကြောင်းအတိအကျသတင်းအချက်အလက်သောကွောငျ့ပယ်ပွင့်လင်းမေးခွန်းများကိုမှပြောင်းရွှေ့ကံဖြစ်ပါတယ်။
ငါကရင် Levy ပြုပါတယ်အချို့သောသုတေသနပြုချက်၌, ကျနော်တို့ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်တံခါးပိတ်နှစ်ဦးစလုံးမေးခွန်းများကိုရဲ့အကောင်းဆုံး feature များပေါင်းစပ်ကြောင်းစစ်တမ်းမေးခွန်း၏သစ်တစ်ခုမျိုးကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားခဲ့ (Salganik and Levy 2015) ။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးဖွင့်မေးခွန်းထဲမှာရှိသကဲ့သို့အချက်အလက်အသစ်သင်ယူဖို့သုတေသီများနိုင်ပါတယ်, ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးတံခါးပိတ်မေးခွန်းထဲမှာရှိသကဲ့သို့ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့လွယ်ကူဖြစ်ထွန်းသည်။ ဝီကီပီးဒီးယားတစ်ဦးစံနမူနာဖြစ်သည့်၏အသုံးပြုသူ-generated content တွေကိုကမောင်းနှင်အွန်လိုင်းစနစ်များဖြင့်မှုတ်သွင်း, ငါတို့စနစ်ကတစ်ဦးဝီကီစစ်တမ်းကိုခေါ်။ Wikipedia နဲ့ရိုးရာစစ်တမ်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများ combing ခွငျးအားဖွငျ့ကြှနျုပျတို့မေးခွန်းများမေး၏အသစ်တစ်ခုလမ်းကိုဖန်တီးရန်မျှော်လင့်ပါတယ်။
တစ်ဦးဝီကီစစ်တမ်းအတွက်ဒေတာစုဆောင်း process ကိုကျွန်တော်တို့ PlaNYC 2030 နယူးယောက်ရဲ့ citywide ရေရှည်တည်တံ့မည့်အစီအစဉ်သို့ဒေသခံများ '' အိုင်ဒီယာပေါင်းစပ်နိုင်ရန်အတွက်နယူးယောက်စီးတီးမြို့တော်ဝန်ရုံးကိုပြုတဲ့စီမံကိန်းကသရုပ်ဖော်နေသည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ဖို့ဖို့, မြို့တော်ဝန်ရုံး၎င်းတို့၏ယခင်အဝေးရောက်အပေါ်အခြေခံပြီး 25 စိတ်ကူးများများစာရင်းကိုထုတ်ပေး (ဥပမာ, ကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်း "၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်စိမ်းလန်းသောကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်. လေးတွေသှနျသငျ" "အချို့စွမ်းအင်ကိုထိရောက်မှုအဆင့်မြှင့်တင်လုပ်ရှိသမျှကြီးမားသောအဆောက်အဦများလိုအပ်၏") ။ ဤ 25 အတွေးအခေါ်များကိုသုံးပြီး "မျိုးစေ့များ," ဟုမြို့တော်ဝန်ရုံးမေးခွန်းကိုမေးလျှင် "သင်တစ်ဦးစိမ်းလန်း, သာ. ကြီးမြတ်နယူးယောက်စီးတီးအတွက်ပိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါသလဲဘယ်?" ဖြေကြားအနှံ့ပွင့်လင်း schoolyards "ဥပမာ (စိတ်ကူးများတရံနှင့်အတူပေးအပ်ခဲ့ အများပြည်သူကစားကွင်းအဖြစ်မြို့ "နှင့်" မြင့်မြင့်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှုန်းထားများ "နဲ့ရပ်ကွက်ပေါများပစ်မှတ်ထားသစ်ပင်တပင်စိုက်), နှင့်သူတို့စပ်ကြား (ပုံ 3.8) ရှေးခယျြဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ ရှေးခယျြပွီးနောကျ, ဖြေဆိုသူချက်ချင်းအိုင်ဒီယာ၏အခြားကျပန်းရွေးချယ်ထားသည့်စုံတွဲနှင့်အတူပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။ ဖြေဆိုသူဖြစ်စေမဲပေးသကဲ့သို့ရှည်လျားသူတို့စေလိုကြောင်းအဖြစ်အဘို့မိမိတို့ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ပံ့ပိုးသို့မဟုတ်ရွေးချယ်ရာတွင်ဆက်လက်နိုငျခဲ့ကွ "ငါသည်ဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူး။ " အရေးကြီးတာက, မည်သည့်အချက်မှာ, ဖြေဆိုသူ, ကရာ-ဆိုင်းငံ့ခွင့်ပြုချက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်များကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ခဲ့ကြတယ် မြို့တော်ဝန်ရဲ့အခြားသူများအားပေးအပ်ခံရဖို့စိတ်ကူးများ၏ရေကူးကန်၏တစိတ်တပိုင်းရုံးမှ-ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သင်တန်းသားများကိုခံယူသောမေးခွန်းများကိုပွင့်လင်းခြင်းနှင့်တစ်ပြိုင်နက်ပိတ်လိုက်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးဝီကီစစ်တမ်းအဘို့အ Interface ကို: 3.8 ပုံ (Salganik and Levy 2015) ။
အဆိုပါမြို့တော်ဝန်ရုံးနေထိုင်သူတုံ့ပြန်ချက်ရရှိရန်အသိုင်းအဝိုင်းအစည်းအဝေးများတစ်စီးရီးနှင့် တွဲဖက်. အောက်တိုဘာလ 2010 ခုနှစ်တွင်၎င်း၏ဝီကီစစ်တမ်းစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အကြောင်းလေးလကျော်, ထားသော 1,436 ဖြေဆိုသူ 31.893 တုံ့ပြန်မှုနှင့် 464 အသစ်အတွေးအခေါ်များလှူဒါန်းခဲ့သည်။ ဝေဖန်, ထိပ်ဆုံး 10 အမှတ်ပေးစိတ်ကူးများ 8 သင်တန်းသားများထက်မြို့တော်ဝန်ရုံးကနေအမြိုးအနှယျစိတ်ကူးများ၏အစု၏အစိတ်အပိုင်းများဖြင့်တင်ထားသောခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက္ကူအတွက်ဖော်ပြဖို့အဖြစ်နှင့်, ဤအများအပြားဝီကီစစ်တမ်းများတစ်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားအသစ်သောသတင်းအချက်အလက်များအားပွင့်လင်းဖြစ်ခြင်းအသုံးပြုပုံသုတေသီများတောင်းဖို့ပိုတံခါးပိတ်ချဉ်းကပ် အသုံးပြု. လွဲချော်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့အမှုအရာကိုသင်ယူနိုင်ကြသည်။